भारतको असमानता अन्तरिक्षबाट पनि देख्न सकिन्छ ! » खबरहरुको एउटै केन्द्र
भारतको असमानता अन्तरिक्षबाट पनि देख्न सकिन्छ !
सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ ११:५६ मा प्रकाशित !
बीबीसी– बाह्य अन्तरिक्षमा रहेको भू–उपग्रहबाट खिचिएको रातको प्रकाशको तस्बिर असमानता मापन गर्ने उपयुक्त तरिका हुनसक्छ ?
अर्थशास्त्री प्रभिन चक्रवर्ती र विवेक देहेजिया यो कुरामा विश्वास गर्छन् । यसका लागि यूएस एयर फोर्स डिफेन्स मेटेरोजिकल स्याटेलाइट कार्यक्रमका भू–उपग्रहहरूले खिचेका तस्बिरहरूको प्रयोग गरे । यी भू–उपग्रहहरूले दिनमा १४ पटक पृथ्वीको चक्कर लगाउँछन् ।
यी भू–उपग्रहहरूले सेन्सरमार्फत रातमा पृथ्वीको सतहका तस्बिरहरू रेकर्ड गरे । त्यसपछि उनीहरूले त्यसमा भारतको नक्सा मिलाएर बाँकी भाग हटाए । यसले उनीहरूलाई जिल्लाहरूको विभिन्न समयको चम्किलोपनको एक फरक तथ्याङ्क समूह निर्माण गर्न समर्थ बनायो ।
रातको प्रकाशले सिर्जना गरेको तथ्याङ्क प्रयोग गरेर उनीहरूले १२ प्रदेशका ६४० मध्ये ३८७ जिल्लाको अध्ययन गरे । यी जिल्लामा भारतको कुल जनसङ्ख्याको ८५% जनसङ्ख्या बस्छ । त्यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादको ८०% हिस्सा यही क्षेत्रमा हुन्छ । त्यस्तै देशको ८७% संसदीय सिट यी जिल्लामा पर्छन् । त्यसपछि उपयुक्त प्रणाली प्रयोग गरेर ती अर्थशास्त्रीहरूले भारतको आय विविधता अभिलेखीकरण गरे ।
भारतका अधिकांश भाग रातमा अन्धकार रहन्छ किनकि रातमा भारतका अधिकांश भागमा निक्कै कम आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ । तर अन्तरिक्षबाट देखिएको मसिनो प्रकारका धर्साहरूले राज्य एकआपसमा र राज्यभित्रै असमान बन्दै गएको देखियो ।
१२ जिल्लाका केही ३८० जिल्ला औसतमा मुम्बई र बेङ्लोरभन्दा पाँच गुणा कम उज्याला थिए ।
त्यस्तै ९०% जिल्ला शीर्षमा रहेका १०% भन्दा एक तिहाइ मात्र उज्याला थिए । त्यो अनुपात भारतले आर्थिक उदारीकरण सुरु भएको वर्ष सन् १९९२ देखि सन् २०१३ मा झन् खराब भएको छ ।
सन् १९९१ अघि विभिन्न राज्यमा आयको केन्द्रीकरणको यो प्रवृत्ति कम थियो । त्यसपछिका वर्षमा असमानता बढ्न थाल्यो । सन् २०१४ सम्म तीन सबैभन्दा धनी राज्यहरू केरेला, तमिलनाडु र महाराष्ट्रका औसत मानिसहरू तीन सबैभन्दा गरिब राज्य विहार, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशका औसत नागरिकभन्दा तीन गुणा धनी भएका छन् ।
“यो अवस्था धनीहरू धेरै धनी र गरिबहरू धेरै गरिब भएर भएको होइन । बरु गरिबहरूको वृद्धि निक्कै न्यून भएर भयो ।” मुम्बईस्थित थिङ्क ट्याङ्क आईडीएफसी इन्स्टिच्युटका वरिष्ठ विज्ञ डा. देहेजियाले भनिन् ।
त्यसो भए समग्रमा जीवनस्तरमा सुधार भइरहँदा पनि किन भारतमा असमानता बढिरहेको छ त ? केही अर्थशास्त्रीका अनुसार यसको पछाडि कुशासन र गरिब क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आवश्यक सीपको अभाव प्रमुख कारण रहेको छ र पनि यसमा रहस्य रहेको छ ।
अर्थशास्त्रीहरूले यो अवस्था चिन्ताजनक भएको बताए । उनीहरूका अनुसार भारत जस्तो जटिल र सघन देशमा यस्तो असमानताले सामाजिक एकतामा खतरा ल्याउँछ । त्यो किन भने गरिब क्षेत्रका लागि हुने खर्च धनी क्षेत्रबाट गइरहँदा यसले धनी क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढाउँछ ।
भू–उपग्रहबाट खिचिएका रातका तस्बिरहरू अन्य फाइदा
यस्तो खालको मापन अन्य देशमा पहिलेदेखि भएको उदाहरण छ । अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कले विद्युत उपभोगलाई आर्थिक कृयाकलापको मापकको रूपमा प्रयोग गर्छ । त्यस्तै पूर्व ह्याब्सवर्ग राज्यको उत्तराधिकारी राज्यहरूमा प्रतिव्यक्ति चिठ्ठी प्राप्तिलाई आर्थिक सामथ्र्यको रूपमा हेर्न सकिने एक अर्थशास्त्रीले बताए । अमेरिकामा केही अर्थशास्त्रीहरूले कङ्कालको अवशेषलाई पनि गुणस्तर र असमानता मापन गर्नका लागि प्रयोग गरेका छन् ।
पछिल्लो समय विकास भएको सेन्सरले भू–उपग्रहले पहिले फोटो खिच्दा वाफ, ओजोन, अन्य अवरोधहरूले पार्ने असर पन्छाउन सक्षम हुन थालेको छ । वैज्ञानिकहरूले यस प्रविधिमा थप स्पष्टता ल्याउनका लागि सफ्टवेर र अल्गोरिदममा काम गरिरहेका छन् ।
रातको प्रकाश द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अनुगमन गर्नका लागि र प्रकोप व्यवस्थापनमा प्रयोग भएको छ । त्यसका साथै तिनले सङ्क्रमणीय रोग, कार्बन उत्सर्जन र प्रकाश प्रदूषणहरू व्याख्या गर्न पनि सहयोग गर्छ ।
“अर्को शब्दमा भन्ने हो भने पृथ्वीको सतहबाट ८०० कि.मि. माथिबाट खिचिएको रातको प्रकाशको अवलोकनले मानव क्रियाकलाप र गतिशीलताका बारेमा अन्य कुनै सूचना स्रोतले भन्न नसक्ने कथा भन्छ ।” यो विषयमा काम गरेका यल विश्वविद्यालयका भरतेन्दु पाण्डेले बताए ।
(बीबीसीका पत्रकार सौतिक विश्वासले तयार पारेको आलेख)
PREVIOUS POST Previous post: स्वेच्छिक अवकाशमा जानका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीले चाहेमा फिर्ता लिन सक्ने
NEXT POST Next post: गायक रामजी खाँडको मार्मिक लोकदोहोरी गीत ” दुई मुटुको धड्कन ” (भिडियो)
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ ११:५६
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ ११:५६
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ ११:५६
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ ११:५६
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, जेष्ठ १४, २०७५ ११:५६